Maamul goboleedyada Soomaaliya miyay ka hareen siyaasadda arrimaha dibadda? - BBC News Somali
Khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sidii xiliyadii hore looga bartay waxaan ka hadlin maamul goboleedada Soomaaliya oo marwalba dowladda kula dhagi jiray go'aanada siyaasadeed ee arrimaha dibadda.
Maamulada ayaa muddooyinkii hore ka garab hadli jiray dowladda, iyagoo cabiraya sida ay la tahay go'aan walba oo ay dowladda federaalka qaadato ee la xiriira siyaasadda arrimaha dibedda.
Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa markii bishii afaraad ee sannadkii 2018-ka xiisad diblomaasiyadeed ay soo kala dhex gashay dalalka Soomaaliya iyo Imaaraadka carabta, kaas oo ay ka hor yimaadeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya oo taageero u muujiyay Imaaraadka.
Bishii Juun ee sannadkii 2017-ka, waxaa sidoo kale qaar kamid ah maamul goboleedyada ay kasoo hor jeedsteen go'aankii dhex-dhexaadnimada ee ay dowladda ka qaadatay khilaafka, qaar badan oo kamid ah maamul goboleedyada Soomaaliya waxay u arkayeen in dowladda Qatar oo lala safto aysan dan ugu jiran, balse ay u muuqden inay ka doorbidayaan Sacuudiga iyo xulafadiisa .
Waxaa jirta aragti xoogan oo ah in dowladda federaalka ay la timid siyaasad ay ku wajahday maamul goboleedyada oo dadka qaar ay u arkayeen "in iyagu ay doonayaan inay go'aan ka garaan" go'aanada siyaasadeed ee u gaarka ah dowladda federaalka.
"Waxaad moodaa runtii xiriirkii u dhaxeeyay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka in uu aad isu badalay, maxaa yeelay Koonfur Galbeed waxaa ka dhashay dowlad cusub oo dowladda federaalka ay aad isugu dhaw yihiin, Puntland ninka hadda ka taliya waa nin aad u xikmad badan oo dowladda in uu la shaqeeyo ayuu diyaar u yahay, Hirshabelle dowladda way la heshiisay wayna la shaqeysay, maskaxda ummadda ayaa isbadashay, Soomalida waxay xaqiiqsatay in wixii ku saabsan arrimaha dibadda looga dambeeyo dowladda federaalka". Waxaa sidaasi BBC-da u sheegay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
Dad badan waxay qabaan inay wax iska badaleen maamul goboleedyada
Dowladad Federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale marar badan ku celcelisay in maamul goboleedyada aysan laheyn awood ay uga hadlaan siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana madaxweyna Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, uu ugu baaqey inay ku ekaadaan adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha u baahan yihiin.
Dad badan waxay u arkayeen in go'aan walba oo ay qaadato dowladda uu caqabad kala kulmi jiray maamul goboleedyada, hasayeeshee hadda oo uu khilaaf soo kala dhex galay Soomaaliya iyo Kenya, waxaa la siweydiinayaa sababta maamul goboleedyada ay uga hadli la' yihiin khilaafkan.
"Arrintan waa arrin masiiri ah oo xuduud, kheyraad, bada iyo barrio ku saleysan, oo mustaqbal ku saleysan arrimhii hore ee ay isku khilaafi jireen na waxau ahaayeen siyaasadeed iyo ganacsi".Waxaa sidaasi BBC-da ku yiri Cadiqaadir Dhaqane oo ah wasiir hore,kana faalooda arrimaha siyaasadda.
Khilaafka diblumaasiyadeed ee soo kala dhex galay dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa soo shaac baxay sabtidii aynu soo dhaafnay, waxaan dowladda Kenya ay sheegtay in Soomaaliya ay xaraashtay ceelal shidaal oo ku yaala xadka badda ee lagu muransan yahay, arrintaasi oo ay ku gacan seertay dwoladda federaalka.
Suudaan oo iska caabisay ciidamo Itoobiyaan ah oo kusoo 'duulay'
Geeri ku timid nin 'horkacayay' xasuuqa boqolaal kun oo qof
Muxuu yahay qofka kale ee loo xiray dilkii loo geystay wiilkii Soomaaliga ahaa